Kooxdee ugu badan ee maaliyadeeda laga iibsadaa caalamka? (Baro Top Ten) - Caasimada Online
Home Warar Kooxdee ugu badan ee maaliyadeeda laga iibsadaa caalamka? (Baro Top Ten)
Kooxdee ugu badan ee maaliyadeeda laga iibsadaa caalamka? (Baro Top Ten)
Kooxaha Manchester United iyo Real Madrid ayaa ugu sita liiska kooxaha ugu iibinta badan maaliyadooda, iyadoo koox weliba ay shantii sano ee lasoo dhaafay caalamka u iib geysay 1.4 milyan oo maaliyado Rasmi ah.
Red Devils iyo Los Blancos ayaa ah labada koox ee ka mid ah sedax kooxood oo dhaafay hal milyan oo maaliyad iib geyn ah intii u dhexeysay 2007-08 iyo 2011-12, halka booska sedaxaad ay degtay kooxda baasas qurxoon ee Barcelona taasoo iyaduna iibsatay 1.15 maaliyado rasmi ah.
Horyaalka Barclays Premier League ayaa afar koox ku leh kooxaha ugu badan ee maaliyado laga iibsado sano walba waana Manchester United, Chelsea, Liverpool iyo Arsenal, Halka Horyaalka Italian Serie A, ay majaraha u hayaan Juventus, Inter iyo AC Milan. Horyaalka aan ka dhicin ee Bundesliga Germany waxaa matalaaya kooxda lagu niinaaso Bavarians ee Bayern Munich, FC Hollywood ayaana ah koox ka mid ah kooxaha sanadii laga iibsado maaliyadaha ugu badan caalamka.
Waxaa sameeyey maaliyadahaan tobanka koox ee ugu sareysa midkood shirkada ku caan baxay qalabka Ispoortiga ee Adidas ama Nike, iyadoo Shirkada waliba ay dhinac u ridatay shan koox oo ka mid ah liiskaan.
Liiska Tobanka koox ee loogu iibsiga badan yahay maaliyadahooda waa sidaan:
# Kooxda Wadanka Qiimaha la iibiyey Shirkada
1 Manchester United England 1.4 milyan Nike
2 Real Madrid Spain 1.4 milyan Adidas
3 Barcelona Spain 1.15 Nike
4 Chelsea England 910 kun Adidas
5 Bayern Munich Germany 880 kun Adidas
6 Liverpool England 810 kun Adidas
7 Arsenal England 800 kun Nike
8 Juventus Italy 480 kun Nike
9 Inter Italy 425 kun Nike
10 AC Milan Italy 350 kun Adidas
*Ogow maaliyadaha la xisaabshay waa kuwa rasmiga loo iibiyey.